ramkrishna February 3, 2021	अर्गानिक खानाको रहस्य : के हुन्छ ? फाइदा के ? जान्नुहाेस्
अर्गानिक हुनका लागि अर्गानिक बालीले संयुक्त राज्यको कृषि विभागले कायम गरेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। यी मापदण्डमा सबै बालीहरू सिन्थेटिक कीटनाशक, कृत्रिम मल, विकिरण र बायोटेक्नोलोजीको प्रयोग नगरी उत्पादन गरिएको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, एन्टिबायोटिक वा सिन्थेटिक वृद्धि हर्मोनको प्रयोग नगरी जनावर हुर्काइएमा पशुजन्य उत्पादनहरू अर्गानिक मानिन्छन्। यी पशुहरू बन्द ठाउँमा नभई बाहिरी खुला स्थानमा चराइएको हुनुपर्छ।
केही स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले अर्गानिक तरिकाले उब्जाइएका अन्न र पशुहरू रसायन भएका बाली वा मासुभन्दा राम्रो उत्पादन हुने विश्वास गर्छन्। केही खानेकुराहरू अर्गानिक रूपमा किन्नुपर्दैन तर अरूका लागि भने तपाईंले अर्गानिक चिह्न लागेको खोज्नुपर्छ । यी उत्पादनहरूमा उच्च मात्रामा कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
Previous Previous post: आइपिओ (IPO) भनेको के हो, किन आवश्यक छ र यसबाट हामीलाई के फाइद हुन्छ ?
Next Next post: चुरोटले ओठ कालो भयो ?